स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको टोलीद्वारा बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउने तयारी, ७२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन | Safal Khabar
मंगलबार, ०९ कार्तिक २०७८, २० : १४
धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारी हटाउन सरकारले तयारी थालेको छ । विभिन्न विवाद र आरोपमा मुछिएका वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न गठित स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको टोलीले मंगलबारदेखि छानबिन सुरु गरेको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यमा सिनेट सदस्य एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.रोशन पोखरेल र सिनेट सदस्य एवं धरानका मेयर तिलक राई छन् । उच्चस्तरिय छानविन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरि, शिक्षाध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल र निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर शाहलाई छु्ट्टाछुट्टै भेटेर ७२ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन निर्देशन दिएको छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउनका लागि टोलीले आन्दोलनरत चिकित्सक, कर्मचारी, धरानका राजनितिक दल, नागरिक दबाब सञ्जाल धरानका प्रतिनिधिहरुलाई भेटेर छलफल समेत गरेको छ । उच्चस्तरिय छानविन समितिको टोलिले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ को दफा ११ को घ अनुसार पदाधिकारीलाई हटाउने प्रकृया अगाडि बढाएको हो ।
एक चौथाई सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै लिखित निवेदन दिएपछि उनीहरुलाई पदबाट हटाउन सहकुलपतिको संयोजकत्वमा २ जना सिनेट सदस्य रहने गरि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन सिनेट बैठकबाट अनुमोदन भएपछि हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार पदबाट प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले राजिनामा दिइसकेको छ । उच्चस्तरिय छानविन समितिले प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
छानविनको पाटोको हकमा प्रगति भएको बताउँदै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले कुलपतिले कानुनी रुपमा नै आयोग गठन गरेर यसको बैधानिक ढंगबाट कुनैबेला अनौपचारिक, कुनैबेला प्रतिवेदन दिन पठाएको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले प्रतिष्ठानमा भएको सबै बेतिथी हटाएर प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो भन्दा अर्को उच्चस्तरिय छानविन समिति अब नबन्ने जनाउँदै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले यही समितिले टुंगोमा पुर्याउने बताउनुभयो ।
धरान उपमहानगरपालिकामा राजनितिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक दबाब सञ्जाल धरानका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेस धरानका उपसभापति एवं वडा नं. १८ वडाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई (प्रविण)ले प्रतिष्ठानका प्रदाधिकारीहरुले तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष यस विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएर प्रतिष्ठानलाई वेथितिमुक्त गर्न आग्रह गर्नुभयो ।